Kulan looga hadlayey dardar gelinta la dagaallanka Burcad badeeda oo lagu qabtay Mudug “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kulan looga hadlayey dardar gelinta la dagaallanka Burcad badeeda oo lagu qabtay Mudug “SAWIRRO”
Kulankaan oo ahaa mid looga hadlayay dardar gelinta ilaalinta Xeebaha iyo la dagaaallanka burcad badeedda iyo kalluumeysiga sharci darada ah, ayaa waxaa Guddoomiyaha Gobalka Mudug iyo saraakiisha ciidanka booliska ay la qaateen ciidamo ka tirsan booliiska ilaalada xeebaha, kuwaasi oo dhawaan loo soo xiray tababar la xiriira ilaalinta xeebaha.
Taliye ku-xiggeenka qeybta booliska Gobalka Mudug Gaashaanle Dhexe Maxamuud Cilmi Gulaafe, ayaa sheegay in ay tahay tababarka ay qaateen mid wax weyn ka tari doona la dagaallanka burcad badeednimada, tahriibka iyo kalluumeysiga sharci darada ah.
Guddoomiyaha Gobalka Mudug Cabdirashiid Xaashi Cartan, ayaa ku booriyay in tababarka ay soo qaateen uga faa’iideeyaaan bulshada Soomaaliyed, waxaana uu tilmaamay in baahi weyn ay u qabeen in la helo ciidamo heysta tababar ku filan oo la xariira ilaalinta xeebaha, maadaama ay jiraan dhibaatooyin lagu hayo kalluumeeysatada Soomaaliyeed.
Guddoomiyaha, ayaa Dawladda Federaalka Soomaaliya ka codsaday in laga caawiyo waxyaabaha ka dhiman oo isugu jira qalab iyo tababaro kasii badan kuwa hadda ay soo qaateen ciidamada booliiska qeybtooda ilaalada xeebaha.
Qaar ka mid ah ciidamadii tababarka soo dhameystay oo la hadlay warbaahinta Qaranka, ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin tababarka ay soo qaateen, ayna diyaar u yihin gudashada waajibaadka Qaran ee ka saaran ilaalinta xeebaha dalka.
Baaq wadajir ah oo ay ku heshiiyeen waddamada Itoobiya, Soomaaliya iyo Ereteriya “SAWIRRO”